Yusof at 34th ASEAN summit
မြန်မာ့ အကြပ်အတည်းဖြေရှင်းဖို့ အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်လိုက်နိုင်တာက၊ အာဆီယံသမိုင်းမှာ ပထမဆုံး တခြားနိုင်ငံပြည်တွင်းရေးဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့၊ အရေးပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ အာဆီယံ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိ အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဌဖြစ်တဲ့ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးထိပ်တန်းအရာရှိကို အခုလို ခန့်အပ်လိုက်တာကနေ နောက်ထပ်ဘယ်လိုထူးခြားမူတွေရှိနေပြီး၊ ဘာတွေစလုပ်ဆောင်ဖို့ အရေးကြီးပါလဲ။ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပေမဲ့၊ လက်တွေ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဆင့် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Erywan Yusof ကို ခန့်အပ်မူကနေ၊ မျှော်လင့်နိုင်တာတွေကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အကြံပေး Panitan Wattanayagorn နဲ့ အာဆီယံကျွမ်းကျင်သူ မမိုးသူဇာတို့ကို ကိုဝင်းမင်းက မေးထားပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ပယာရွတ်ချန်အိုချာ ရဲ့ လုံခြုံရေးအကြံပေး ဥက္ကဌပါမောက္ခ Panitan Wattanayagorn က အခု ခန့်အပ်မှုရဲ့အရေးပါမှုကို စရှင်းပြပါတယ်။
ဒေါက်တာ Prof. Panitan Wattanayagorn။. ။ အဓိက ၂ ခု အရေးပါပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ အရေးပေါ်လုပ်ဖို့ အားလုံးက သဘောတူတာကို ထင်ဟပ်တဲ့ အားလုံးသိ အာဆီယံပုံစံနဲ့ ပထမဆုံး ဖြစ်လာတာပါ။ ပထမဆုံးဆိုတာက အာဆီယံနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ပြည်တွင်းရေးက တခြားနိုင်ငံတွေကို အများကြီးထိခိုက်လာတဲ့အခါမှာ၊ အာဆီယံရဲ့ အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကိုပါ။ ဒါက တကယ့်ကို အရေးပါစွာနဲ့ အာဆီယံအတွက် အဖွဲ့အစည်းအရ အသိအမှတ်ပြုလိုက်ရတာပါ။ တဖက်မှာတော့ သိပါတယ် - လူ့အသက်ပေါင်းများစွာကို ကာကွယ်ပေးဖို့ အခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုး ဟိုးအရင်ကြီးထဲကဖြစ်ခဲ့ဖို့ လူတွေအများကြီး မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့၊ အခုလည်း ဖြစ်လာတာက၊ အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေအတွက် မကြုံစဖူး ကြီးမားအရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အခုခန့်အပ်မှုရဲ့ အရေးပါမှုကိုလည်း စင်္ကာပူအခြေစိုက်. ISEAS Yusof Ishak Institute ခေါ် အရှေ့တောင်အာရှလေ့လာရေးဌာန ရှိ မြန်မာအစီအစဉ် ညှိနှိုင်းရေးမှူး မမိုးသူဇာ ကလည်း
မမိုးသူဇာ ။. ။ အာဆီယံရဲ့ အလှည့်ကျဥက္ကဌ အနေအထားကို မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စကို ဝင်ရောက်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် အလှည့်အပြောင်းကြားမှာ စဉ်ဆက်မပြတ်အောင်ယူထားတယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ ခုဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်း အရေးကြီးတဲ့ အခြေအနေတွေအားလုံးသည် ဘရူနိုင်းနိုင်ငံက တာဝန်ယူထားတဲ့နှစ်အချိန်ကာလမှာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကာလမှာ ဦးဆောင်ပြီးတော့ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့အတွက် အာဆီယံအတွင်း တူညီဆန္ဒဆုံးဖြတ်ပေးဖို့အတွက် အဓိကတာဝန်ကျတာကတော့ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနှစ်ကုန်ပြီးရင်တော့ ၂ဝ၂၂ ခုနှစ်အတွက် အလှည့်ကျ ဥက္ကဌတာဝန်ယူရမှာ ကမ္ဘောဒီယားနိုင်ငံ နောက်ပြီးတော့ အလှည့်ကျမှာက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံပါ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒီခန့်အပ်မှုရဲ့ နောက်တခု အရေးပါပုံကိုလည်း ချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပါမောက္ခ Panitan က ဆက်ပြီး
ဒေါက်တာ Prof. Panitan Wattanayagorn။. ။ ပိုအရေးကြီးတာက မြန်မာကိုပူးပေါင်းကူညီပေးဖို့၊ သတင်းပတ်ပေါင်းများစွာ ရပ်ဆိုင်းရခဲ့တာကနေ၊ အခု အထူးလမ်းကြောင်းသစ်ကိုသုံးပြီး၊ နိုင်ငံထဲသွားဖို့ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အဖွဲကိုဖွဲ့ပြီးတာနဲ့၊ အမြန်ဆုံး ပြန်စဖြစ်လာနိုင်မှာပါ။ နောက်၊ ကုလသမဂ္ဂတို့၊ တခြား ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေ၊ နောက် အစိုးရမဟုတ်တဲ့ NGO တွေ၊ ဝိုင်းကြိုးပမ်းပေးနေတာတွေလည်း၊ အထူးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ လက်တွဲလုပ်နိုင်တော့မှာပါ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ လက်တွေ့ မြန်မာပြည်သူတွေ၊ နောက် နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ အရေးကြီးဆုံးကိစ္စကို အလေးပေး လက်တွဲလုပ်သွားနိုင်မှာပါ။ အရေးကြီးဆုံးကတော့ မကြာခင်လအနည်းငယ်တွင်း၊ ပြဿနာတွေ ကူရှင်းပေးဖို့၊ နိုင်ငံရေးအကွဲအောက်က အကြမ်းဖက်မူတွေ၊ ကိုဗစ်ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါဒဏ်တွေနဲ့ နောက်ရှေရှည်မှာ ရွေးကောက်ပွဲအထိပေါ့နော်၊ ဒါတွေကို အထူးကိုယ်စားလှယ်တစ်ဖွဲ့ထဲလုပ်ဖို့ မဟုတ်ပါဘူး၊ အားလုံးနဲ့ အနီးကပ်တွဲလုပ်ဖို့ပါ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒီနေရာမှာ အခုခန့်အပ်လိုက်တဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်.Erywan Yusof ရဲ့ တကယ်တန်း အရေးပါမှုကို အာဆီယံကို အဓိကလေ့လာနေတဲ့ မမိုးသူဇာ က
မမိုးသူဇာ ။. ။ အမှန်မှာတော့ သူက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကိုတာဝန်ယူထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက Sultan ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်. Hassanal Bolkiah ဘရူနိုင်းနိုင်ငံရဲ့ အစိုးရအကြီးအကဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကနေပြီးတော့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတာဝန်ကို ယူပြီးတော့ လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီနေရာမှာလည်း အထူးကိုယ်စားလှယ်တယောက်တည်း ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမှာ မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ဝိုင်းဝန်းပံပိုး အကြံပြုပေးမယ့် တခြားအဖွဲ့ဝင်တွေကိုလည်း တာဝန်တွေပေးဖို့လိုတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ အဲဒီတော့ အခုအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ အရေးကြီးဆုံး ဘာစလုပ်သင့်ပါသလဲလို့မေးရာမှာ ဒေါက်တာ Panitan က
ဒေါက်တာ Prof. Panitan Wattanayagorn။. ။ အထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ အရေးတကြီး လုပ်သင့်တာက၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲသွားဖို့၊ ပါတီမျိုးစုံနဲ့တွေ့ဖို့၊ အထူးသဖြင့် အရပ်သားအတိုက်အခံပါတီနဲ့တွေ့ဖို့၊ အခုချက်ချင်း လမ်းပြမြေပုံစပြင်ဖို့ပါ။ အဓိကတော့ မြန်မာပြည်သူတွေ အကြီးအကျယ်ခံစားနေရတဲ့ လူသားချင်းစာနာမူဆိုင်ရာပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ အကြမ်းဖက်မူတွေ၊ နောက် ကဏ္ဍများစွာမှာ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါအခုပျံ.နှံနေတာအတွက်ပါ ကူရှင်းပေးဖို့လမ်းကြောင်ပေါ်လာဖို့ပါ။ ဒီအစီအစဉ်တွေ မကြာခင်ပေါ်ထွက်လာဖို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ထိုင်းအပါအဝင် နိုင်ငံများစွာမှာ ကိုဗစ်-19 ဒဏ် တကယ်ခံနေရပေမဲ့၊ ဒါကို အားလုံးဝိုင်းကူဖို့ အသင့်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေက ထိုင်းအပါအဝင် နိုင်ငံများစွာမှာပျံ.နှံနေထိုင်နေကြပြီး၊ အာဆီယံနိုင်ငံသားအဖြစ် အခု သဘောထားကာ၊ အမြန်ဆုံးကူပေးသင့်ချိန်ရောက်နေပါပြီ။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ ဒါအပြင် မမိုးသူဇာ ကလည်း
မမိုးသူဇာ ။. ။ ရှေ့လျှောက်ကတော့ အချိန်ရော အားစိုက်မှုရော အများကြီး လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အခုလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဓိက လိုအပ်နေတာသည် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီ အထူးသဖြင့် ကိုဗစ်ကိစ္စလိုအပ်နေတဲ့ ဆေးဝါးအကူအညီ ဦးစားပေးမယ်။ အရေးအကြီးဆုံး မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခံစားနေရတဲ့အနေအထားတွေ အရေးကြီးတဲ့ သဘောထားတွေ ဆန္ဒတွေအားလုံးကို ရယူနားလည်နိုင်ဖို့က ပထမဆုံး သူကြိုးစားရပါမယ်။
ကိုဝင်းမင်း ။. ။ တကယ်တော့ မြန်မာအရေး အာဆီယံ ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေက နှောက်နှေးလွန်းတယ်လို့ ဝေဖန်သူတွေက ပြောနေကြပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ အမေရိကန် ၊ ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းကပြောနေတာကတော့ အာဆီယံကို ရှေ့ကနေဦးဆောင်ဖို့ တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
အာဆီယံ အထူးသံခန့်အပ်မှု အပေါ် အပြုသဘော အမြင်တချို့(WM)
မွနျမာ့ အကွပျအတညျးဖွရှေငျးဖို့ အာဆီယံအထူးကိုယျစားလှယျခနျ့အပျလိုကျနိုငျတာက၊ အာဆီယံသမိုငျးမှာ ပထမဆုံး တခွားနိုငျငံပွညျတှငျးရေးဝငျဆောငျရှကျနိုငျဖို့၊ အရေးပျေါဆုံးဖွတျခကျြဖွဈတယျလို့ အာဆီယံ ကြှမျးကငျြသူတှကေ ဆိုပါတယျ။ လကျရှိ အာဆီယံအလှညျ့ကြ ဥက်ကဌဖွဈတဲ့ ဘရူနိုငျးနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံခွားရေးထိပျတနျးအရာရှိကို အခုလို ခနျ့အပျလိုကျတာကနေ နောကျထပျဘယျလိုထူးခွားမူတှရှေိနပွေီး၊ ဘာတှစေလုပျဆောငျဖို့ အရေးကွီးပါလဲ။ ဘရူနိုငျးနိုငျငံ ဒုတိယနိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးအဖွဈသတျမှတျထားပမေဲ့၊ လကျတှေ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးအဆငျ့ ဆောငျရှကျနတေဲ့ Erywan Yusof ကို ခနျ့အပျမူကနေ၊ မြှျောလငျ့နိုငျတာတှကေို ထိုငျးဝနျကွီးခြုပျအကွံပေး Panitan Wattanayagorn နဲ့ အာဆီယံကြှမျးကငျြသူ မမိုးသူဇာတို့ကို ကိုဝငျးမငျးက မေးထားပါတယျ။
ဟုတျကဲ့။ ထိုငျးဝနျကွီးခြုပျ ပယာရှတျခနျြအိုခြာ ရဲ့ လုံခွုံရေးအကွံပေး ဥက်ကဌပါမောက်ခ Panitan Wattanayagorn က အခု ခနျ့အပျမှုရဲ့အရေးပါမှုကို စရှငျးပွပါတယျ။
ဒေါကျတာ Prof. Panitan Wattanayagorn။. ။ အဓိက ၂ ခု အရေးပါပါတယျ။ တဈခုကတော့ အရေးပျေါလုပျဖို့ အားလုံးက သဘောတူတာကို ထငျဟပျတဲ့ အားလုံးသိ အာဆီယံပုံစံနဲ့ ပထမဆုံး ဖွဈလာတာပါ။ ပထမဆုံးဆိုတာက အာဆီယံနိုငျငံတဈခုရဲ့ ပွညျတှငျးရေးက တခွားနိုငျငံတှကေို အမြားကွီးထိခိုကျလာတဲ့အခါမှာ၊ အာဆီယံရဲ့ အမွငျ့ဆုံးအဆငျ့မှာ ဆုံးဖွတျလိုကျတာကိုပါ။ ဒါက တကယျ့ကို အရေးပါစှာနဲ့ အာဆီယံအတှကျ အဖှဲ့အစညျးအရ အသိအမှတျပွုလိုကျရတာပါ။ တဖကျမှာတော့ သိပါတယျ - လူ့အသကျပေါငျးမြားစှာကို ကာကှယျပေးဖို့ အခုလိုဆုံးဖွတျခကျြမြိုး ဟိုးအရငျကွီးထဲကဖွဈခဲ့ဖို့ လူတှအေမြားကွီး မြှျောလငျ့ခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့၊ အခုလညျး ဖွဈလာတာက၊ အာဆီယံခေါငျးဆောငျတှအေတှကျ မကွုံစဖူး ကွီးမားအရေးပါတဲ့ဆုံးဖွတျခကျြပါ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အခုခနျ့အပျမှုရဲ့ အရေးပါမှုကိုလညျး စင်ျကာပူအခွစေိုကျ. ISEAS Yusof Ishak Institute ချေါ အရှတေ့ောငျအာရှလလေ့ာရေးဌာန ရှိ မွနျမာအစီအစဉျ ညှိနှိုငျးရေးမှူး မမိုးသူဇာ ကလညျး
မမိုးသူဇာ ။. ။ အာဆီယံရဲ့ အလှညျ့ကြဥက်ကဌ အနအေထားကို မွနျမာနိုငျငံအရေးကိစ်စကို ဝငျရောကျဖွရှေငျးဖို့အတှကျ အလှညျ့အပွောငျးကွားမှာ စဉျဆကျမပွတျအောငျယူထားတယျလို့ သုံးသပျမိပါတယျ။ ခုဖဖေျောဝါရီလ ၁ ရကျနေ့ နောကျပိုငျး အရေးကွီးတဲ့ အခွအေနတှေအေားလုံးသညျ ဘရူနိုငျးနိုငျငံက တာဝနျယူထားတဲ့နှဈအခြိနျကာလမှာ ပျေါပေါကျခဲ့တယျဆိုတဲ့ကာလမှာ ဦးဆောငျပွီးတော့ ဒီနှဈအတှငျးမှာ ကိုငျတှယျဖွရှေငျးဖို့အတှကျ အာဆီယံအတှငျး တူညီဆန်ဒဆုံးဖွတျပေးဖို့အတှကျ အဓိကတာဝနျကတြာကတော့ ဘရူနိုငျးနိုငျငံဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနှဈကုနျပွီးရငျတော့ ၂ဝ၂၂ ခုနှဈအတှကျ အလှညျ့ကြ ဥက်ကဌတာဝနျယူရမှာ ကမ်ဘောဒီယားနိုငျငံ နောကျပွီးတော့ အလှညျ့ကမြှာက အငျဒိုနီးရှားနိုငျငံပါ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒီခနျ့အပျမှုရဲ့ နောကျတခု အရေးပါပုံကိုလညျး ခြူလာလောငျကှနျးတက်ကသိုလျ နိုငျငံရေးသိပ်ပံပါမောက်ခ Panitan က ဆကျပွီး
ဒေါကျတာ Prof. Panitan Wattanayagorn။. ။ ပိုအရေးကွီးတာက မွနျမာကိုပူးပေါငျးကူညီပေးဖို့၊ သတငျးပတျပေါငျးမြားစှာ ရပျဆိုငျးရခဲ့တာကနေ၊ အခု အထူးလမျးကွောငျးသဈကိုသုံးပွီး၊ နိုငျငံထဲသှားဖို့ အထူးကိုယျစားလှယျရဲ့အဖှဲကိုဖှဲ့ပွီးတာနဲ့၊ အမွနျဆုံး ပွနျစဖွဈလာနိုငျမှာပါ။ နောကျ၊ ကုလသမဂ်ဂတို့၊ တခွား ဒသေဆိုငျရာအဖှဲ့တှေ၊ နောကျ အစိုးရမဟုတျတဲ့ NGO တှေ၊ ဝိုငျးကွိုးပမျးပေးနတောတှလေညျး၊ အထူးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့နဲ့ လကျတှဲလုပျနိုငျတော့မှာပါ။ နောကျဆုံးမှာတော့ လကျတှေ့ မွနျမာပွညျသူတှေ၊ နောကျ နိုငျငံရေးပါတီတှနေဲ့ အရေးကွီးဆုံးကိစ်စကို အလေးပေး လကျတှဲလုပျသှားနိုငျမှာပါ။ အရေးကွီးဆုံးကတော့ မကွာခငျလအနညျးငယျတှငျး၊ ပွဿနာတှေ ကူရှငျးပေးဖို့၊ နိုငျငံရေးအကှဲအောကျက အကွမျးဖကျမူတှေ၊ ကိုဗဈကမ်ဘာ့ကပျရောဂါဒဏျတှနေဲ့ နောကျရှရှေညျမှာ ရှေးကောကျပှဲအထိပေါ့နျော၊ ဒါတှကေို အထူးကိုယျစားလှယျတဈဖှဲ့ထဲလုပျဖို့ မဟုတျပါဘူး၊ အားလုံးနဲ့ အနီးကပျတှဲလုပျဖို့ပါ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒီနရောမှာ အခုခနျ့အပျလိုကျတဲ့ အထူးကိုယျစားလှယျ.Erywan Yusof ရဲ့ တကယျတနျး အရေးပါမှုကို အာဆီယံကို အဓိကလလေ့ာနတေဲ့ မမိုးသူဇာ က
မမိုးသူဇာ ။. ။ အမှနျမှာတော့ သူက နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး ကိုတာဝနျယူထားတဲ့သူတယောကျဖွဈပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လညျး ဆိုတော့ ဘရူနိုငျးနိုငျငံရဲ့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးက Sultan ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့. Hassanal Bolkiah ဘရူနိုငျးနိုငျငံရဲ့ အစိုးရအကွီးအကဲဖွဈတယျဆိုတဲ့နရောမှာ ကနပွေီးတော့ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးတာဝနျကို ယူပွီးတော့ လုပျဆောငျနတောဖွဈပါတယျ။ ပွီးတော့ ဒီနရောမှာလညျး အထူးကိုယျစားလှယျတယောကျတညျး ဖွရှေငျးနိုငျတဲ့အနအေထားမှာ မရှိတဲ့အတှကျကွောငျ့ ဝိုငျးဝနျးပံပိုး အကွံပွုပေးမယျ့ တခွားအဖှဲ့ဝငျတှကေိုလညျး တာဝနျတှပေေးဖို့လိုတယျလို့ပဲမွငျပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ အဲဒီတော့ အခုအာဆီယံအထူးကိုယျစားလှယျအနနေဲ့ အရေးကွီးဆုံး ဘာစလုပျသငျ့ပါသလဲလို့မေးရာမှာ ဒေါကျတာ Panitan က
ဒေါကျတာ Prof. Panitan Wattanayagorn။. ။ အထူးကိုယျစားလှယျအနနေဲ့ အရေးတကွီး လုပျသငျ့တာက၊ မွနျမာနိုငျငံထဲသှားဖို့၊ ပါတီမြိုးစုံနဲ့တှဖေို့၊ အထူးသဖွငျ့ အရပျသားအတိုကျအခံပါတီနဲ့တှဖေို့၊ အခုခကျြခငျြး လမျးပွမွပေုံစပွငျဖို့ပါ။ အဓိကတော့ မွနျမာပွညျသူတှေ အကွီးအကယျြခံစားနရေတဲ့ လူသားခငျြးစာနာမူဆိုငျရာပွဿနာတှဖွေဈတဲ့ အကွမျးဖကျမူတှေ၊ နောကျ ကဏ်ဍမြားစှာမှာ အထူးသဖွငျ့ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါအခုပြံ.နှံနတောအတှကျပါ ကူရှငျးပေးဖို့လမျးကွောငျပျေါလာဖို့ပါ။ ဒီအစီအစဉျတှေ မကွာခငျပျေါထှကျလာဖို့ မြှျောလငျ့ထားပါတယျ။ ထိုငျးအပါအဝငျ နိုငျငံမြားစှာမှာ ကိုဗဈ-19 ဒဏျ တကယျခံနရေပမေဲ့၊ ဒါကို အားလုံးဝိုငျးကူဖို့ အသငျ့ပါ။ မွနျမာနိုငျငံသားတှကေ ထိုငျးအပါအဝငျ နိုငျငံမြားစှာမှာပြံ.နှံနထေိုငျနကွေပွီး၊ အာဆီယံနိုငျငံသားအဖွဈ အခု သဘောထားကာ၊ အမွနျဆုံးကူပေးသငျ့ခြိနျရောကျနပေါပွီ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ ဒါအပွငျ မမိုးသူဇာ ကလညျး
မမိုးသူဇာ ။. ။ ရှလြေှ့ောကျကတော့ အခြိနျရော အားစိုကျမှုရော အမြားကွီး လိုအပျပါလိမျ့မယျ။ အခုလကျရှိအနအေထားမှာတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ အဓိက လိုအပျနတောသညျ လူသားခငျြးစာနာမှုဆိုငျရာ အကူအညီ အထူးသဖွငျ့ ကိုဗဈကိစ်စလိုအပျနတေဲ့ ဆေးဝါးအကူအညီ ဦးစားပေးမယျ။ အရေးအကွီးဆုံး မွနျမာနိုငျငံမှာ ခံစားနရေတဲ့အနအေထားတှေ အရေးကွီးတဲ့ သဘောထားတှေ ဆန်ဒတှအေားလုံးကို ရယူနားလညျနိုငျဖို့က ပထမဆုံး သူကွိုးစားရပါမယျ။
ကိုဝငျးမငျး ။. ။ တကယျတော့ မွနျမာအရေး အာဆီယံ ရဲ့လုပျဆောငျမှုတှကေ နှောကျနှေးလှနျးတယျလို့ ဝဖေနျသူတှကေ ပွောနကွေပါတယျ။ တရုတျနဲ့ အမရေိကနျ ၊ ကုလသမဂ်ဂအပါအဝငျ နိုငျငံတကာ အသိုငျးအဝနျးကပွောနတောကတော့ အာဆီယံကို ရှကေ့နဦေးဆောငျဖို့ တိုကျတှနျးနကွေပါတယျခငျဗြာ။